रोचक खबर Archives - Nepali in Australia
January 16, 2022 autherLeaveaComment on एलियनका १२ वटा जहाज लाइन लागेर उडेको देखियो, बैज्ञानिक नै चकित ! (भिडियोसहित)
एउटा विमानको ककपिटबाट खिचिएको भिडियो अहिले भाइरल बनिरहेको छ । उक्त भिडियोमा १२ वटा अज्ञात उडनतश्तरी एकैपटक उडिरहेको देख्नसकिन्छ । प्रशान्त महासागर माथिको आकाशमा बादलमाथि प्रकाशका ढिक्काहरु उडिरहेको र केही समयपछि बादलभित्र हराएको भिडियोमा देखिन्छ । सुरुमा भिडियोमा ९ वटा प्रकाशका ढिक्का देखिन्छन् र पछि १२ वटा प्रकाशका ढिक्का उडिरहेका देखिन्छन् । समुद्र सटहबाट ३९ […]
January 15, 2022 autherLeaveaComment on भारत–पाकिस्तान विभाजनका बेला छुट्टिएका दाजुभाईको जब ७४ वर्षपछि पुनर्मिलन भयो…
इस्लामाबाद । सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको थियो । तर, स्वतन्त्रतसँगै भारतको विभाजनले ठूलो मूल्य चु’काएको थियो । भारतीय उपमहाद्धीप दुई ओटा स्वतन्त्र क्षेत्र– भारत र पाकिस्तानको रुपमा विभाजित भएको थियो । विभाजनसँगै हिंसा र नरसंहार पनि म’च्चिएको थियो । विभाजनको घाउ अझै पनि दुबै देशमा देखिन्छ ।भारत र पाकिस्तान विभाजनको समयमा […]
January 13, 2022 autherLeaveaComment on लामो नङ पालेरै विश्व रेकर्ड राखे श्रीधरले, नङकै कारण युवती विवाह गर्न मानेनन्
लामो नङ पालेरै विश्व रेकर्ड राखे श्रीधरले, नङकै कारण युवती विवाह गर्न मानेनन् काठमाडौँ – बिश्वमा धेरै प्रतिभा भएका मानिसहरु छन् । धेरैले अनौठो कार्य गरेरै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड पनि राखेका छन् ।त्यस्तै एक पुरुषले पनि आफ्नो अनौठो प्रतिभाले बिश्वलाई नै चकित पारेका छन्। उनको लामो नङ देखेर जोकोही हेरेको हेर्यै हुन्छ । […]
January 13, 2022 autherLeaveaComment on गाईलाई भीआर चस्मा लगाइदिँदा खुसी भएर धेरै दूध दियो !
January 7, 2022 autherLeaveaComment on यी ४ ठाउँमा कालो कोठी भएका व्यक्तिसँग कहिलै हुँदैन धनको कमी
समुद्रशास्त्रमा व्यक्तिको शरीरका बारेमा निकै धेरै कुरा बताइएको छ। शरीरको अंगमा निसान, हत्केलाको रेखा, हाँस्नु मुस्कुराउनु आदीका बारेमा विस्तारमा बताइएको छ।जसमा कालो कोठीका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। समुद्रशास्त्रमा शरीरका यी ४ भागमा कालो कोठी हुनु निकै शुभ मानिन्छ। १) समुद्रशास्त्रमा जुन व्यक्तिको पेटमा तिल छ, त्यसलाई अशुभ मानिन्छ। उक्त कोठीलाई दुर्भाग्यको सुचक मानिने गरिन्छ। […]
चीनमा पानीको चरम अभावः जनसंख्या विश्वको २० प्रतिशत तर पानी ७ प्रतिशत मात्रै
January 6, 2022 autherLeaveaComment on चीनमा पानीको चरम अभावः जनसंख्या विश्वको २० प्रतिशत तर पानी ७ प्रतिशत मात्रै
बढ्दो जनसङ्ख्या र खेतीयोग्य जमिनको प्रयोगका कारण चीनमा पानीको सङ्कट अरब राष्ट्रको तुलनामा गम्भीर बनेको छ । चीनमा पानीको संकट गहिरिँदै गएको छ । उत्तर चीनको अवस्था अरब देशको भन्दा खराब बन्दै गएको छ। चीनको यो जलसंकट एसियाका अन्य देशका लागि पनि ड’रलाग्दो हुनसक्छ । चीनमा विश्वको जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत छ, तर त्यहाँ पानी मात्र […]
January 6, 2022 autherLeaveaComment on चीनले बनायो वास्तविक सूर्यभन्दा पाँच गुणा ताप भएको कृत्रिम सूर्य
बेइजिङ : चीनले ‘कृत्रिम सूर्य’ को सफल परीक्षण गरेको छ । भविष्यमा स्वच्छ उर्जाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै उसले कृत्रिम सूर्यको परीक्षण गरेको हो । ए’क्सपेरियन्सल एडभान्स्ड सुपरकन्डक्टिङ टोकामाक (इएएसटी) नाम दिइएको परीक्षणलाई बेइजिङले पारमाणविक फ्युजन भट्टी भनेको छ । ७ करोड डिग्री सेल्सियस ताप भएको सो भट्टीलाई १७ मिनेटभन्दा बढी समय सञ्चालनमा ल्याइएको […]
January 4, 2022 autherLeaveaComment on अत्यधिक जाडोमा चिनियाँ सेनाको प्रशिक्षण, शरिरबाट निस्किएको पसिना बरफ बन्यो! (भिडिओ)
बेइजिङ। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले अत्यधिक जाडोमा प्रशिक्षण गर्दा उनीहरुको शरिरबाट निस्किएको पसिना बरफ बनेको पिपुल्स डेलीले जनाएको छ। चिनियाँ सरकारको मुखपत्रको रुपमा रहेको पिपुल्स डेलीले एक भिडिओ सार्वजनिक गरेको छ जहाँ सेनाको कपालमा बरफ देख्न सकिन्छ। पत्रिकाका अनुसार सो बरफ सेनाको शरीरबाट निस्किएको पसिना हो। अत्यधिक जाडोमा अभ्यास गर्दा झरेको पसिना बरफ बनेको दाबी गरिएको […]
January 3, 2022 autherLeaveaComment on २२ वर्षकी युवती जसले आफ्नै ‘खुट्टाको फोटो’ बेचेर महिनाको १२ लाख कमाउँछिन !
एजेन्सी : अमेरिकाकी २२ वर्षकी युवती डिजायर गेटो एक समय रियलस्टेट व्यवसाय गरेर सामान्य जीवन बिताइरहेकी थिइन्। यससँगै उनले साइड बिजनेसको रुपमा मोडलिङ गर्न थालिन् । यस क्रममा उनले मानिसहरुले उनको खुट्टा निकै मन पराउने थाहा पाइन् । उनका खुट्टाको तस्वीरको लागि मानिसहरु ठूलो रकम खर्च गर्न तयार रहेको थाहा पाउँदा उनलाई अचम्म लाग्यो । […]